Raharaham-pitsarana – Nihena be ireo olona maka mpisolovava - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Raharaham-pitsarana – Nihena be ireo olona maka mpisolovava
Afaka manao asa maimaim-poana ihany koa anefa ireo mpisolovava arakaraka ilay raharaha
Misy fiantraikany amin’ny asan’ny mpisolovava eto amintsika ihany koa ny krizy. Vitsy amin’ireo olona manana raharaha eny anivon’ny Fitsarana no maka ireny mpisolovava ireny amin’izao fotoana. Raharaham-pitsarana fito amin’ny 10 no voamarika fa tsy ahitana mpisolovava, araka ny hita teny amin’ny tribonaly Anosy.
Mahatsapa izany fihenana izany koa ny ankamaroan’ ireo mpisolovava. « Raha tafakatra hatramin’ny olona dimy isan-kerinandro no narovana teo aloha, dia lasa nihena telo izany na indraindray tsy misy mihitsy », araka ny fitarainan’ny mpisolovava iray. Voatery izy ireo araka izany nanamboatra sy mampidina ny saran’ny fiarovana olona iray.
Ny tsy fahampiana ara-bola avokoa no voalazan’ ireo olona nanontaniana fa tsy hirosoany amin’ny fakàna mpisolovava.
« Tena sakana tsy ahafahana maka mpisolovava tokoa ny tsy fananam-bola. Noheverinay ihany koa anefa fa raharaha tsy dia atahorana no mahavoasingotra anay », hoy ny fanehoan-kevitr’i Henriette Rasoazanany izay voarohirohy nandrahona sy niteny ratsy olona.
Nanentana kosa anefa ireo mpisolovava fa matetika misy fiantraikany eo amin’ny raharaham-pitsarana ny tsy fangalana mpisolovava.
Fitsarana, Mpisolovava, Mpanoratra Rijakely, 05.07.2012, 09:15	FIARAHAMONINA